Anazi ngisho bazi ukuthi lezi 7 izitsha kungenziwa kuphekwe in a yensimbi waffle
waffle Abampofu bavame kokungenzi lutho ezisemagumbini emnyama amakhabethe izinsuku eziyisithupha ngesonto, bese uzithola ngezikhathi ezithile kuphela ngeSonto ukupheka waffles ngesidlo sasekuseni. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abaningi abalibheki insimbi waffle njengoba iyunithi monofunctional. Nokho, isikhathi sokuba wena kabusha. Waffle yensimbi uyakwazi okuningi nje waffle. Sikhuluma mayelana steaks, amazambane, i-pizza nokunye. Njengoba kuvela, kudingeka nje zibuze umbuzo "Ngingaba ukupheka it in yensimbi waffle?", Futhi uzomangala impendulo uzokhombisa ukuthi unalo igciwane cishe ngaso sonke isikhathi. Eminyakeni yamuva, le ndlela ukupheka sekwande kakhulu - ngale ndaba ebhaliwe cookbooks, olwenziwe iziteshi ze-YouTube, nokunye. Ngakho-ke, uma une yensimbi waffle ukuthi ingenzi lutho isikhathi sabo esiningi ekamelweni - une isikhathi siya emsebenzini.
Heshbraun nge rosemary
amazambane yashizi kufanele ibekwe endaweni yensimbi waffle, unezela ibhotela kancane futhi e-rosemary. Awudingi ukuze ujike prodelyvat noma nezinye izenzo nge heshbraunom yakho - uqweqwe yegolide izuzwe kalula ukusetshenziswa yensimbi waffle nxazonke izitsha. Ngokuba ukulungiswa udinga ukufaka ama-shisisa waffle, amazambane yashizi ukuhlukana umswakama ngokweqile. Hlanganisa amazambane nge izinongo rosemary nezinye ukunambitha, ukuxubha zombili sensimbi waffle ngamafutha futhi basakaze eziningi amazambane phezulu. amazambane Warm imizuzu emibili, bese ucindezela phansi lid ingcindezi eyengeziwe ku heshbraun bese brown yegolide.
Abantu bangase bacabange ukuthi Uyahlanya lapho zibona ukuthi ubeka ucezu obukhulu inyama yensimbi waffle. Nokho, it is ngokumangalisayo ihlala kahle okwesikhashana, uma ungafaka Steak yakho, ngokuphelele pink ngaphakathi kahle okugazingiwe ngaphandle. Ukuze kulungiswe Steak, udinga kuphela ukubeka inyama phezu yensimbi waffle futhi ukuyivala cishe imizuzu engu-eyisishiyagalombili. Uma une-thermometer kwi yensimbi waffle, ungabheka izinga lokushisa ukupheka, uma kungenjalo, khona-ke emva kwemizuzu eyisishiyagalombili incise inyama uhlole ukuthi uye walungisa ngokwanele. Uma kungenjalo, uwubeke yensimbi waffle ukuze uthole enye i ngomzuzu.
Kuyinto imfihlo indlela yokwenza Umakharoni noshizi. Nokho, abantu abaningi bayazibuza ukuthi kufanele enzeni izinsalela? Udinga nje kuphela ukuba usebenzise yensimbi waffle kuzuzwe ngaphandle omnandi futhi okuqukethwe okukhazimulayo viscous ngaphakathi. Ngakho, izinsalela macaroni yakho noshizi uzodinga sibe yimichilo amancane bese abeke etafuleni izimbizana ezintathu - oyedwa uthele ufulawa kwenye aphule amaqanda ambalwa, kanti kowesithathu ukuxubana ushizi isinkwa imvuthu. Ngakwelinye Dip emapheshana pasta ne ushizi ngayinye izimbizana ezintathu, abese ubhake nabo ngensimbi waffle.
Marinara sauce uyahamba emgodini eyenziwe yensimbi inhlama waffle futhi ushizi elicibilikile ukuphothula umsebenzi esele. Yiqiniso, ungasebenzisa imishini ezengeziwe Ncibilikisa ushizi ku pizza ngomumo eyenziwe, kodwa uma ucabanga ukuthi ngafanele ngalesosikhathi ungakwazi kalula wenze pizza avaliwe "Calzone". Kunoma ikuphi, okokuqala udinga ukulungiselela futhi ukhiphe inhlama nokulungisa ukugxusha. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga WENZE Batter esitolo - ngeke kakhulu kube lula ukuphila kwakho, kodwa namanje uma ufuna ukupheka pizza eyiqiniso, kungcono ukwenza yonke into ngokwakho. Uma wenza calzone, udinga ukubeka ukugxusha kwenye emaphethelweni pizza, bese bevala nomunye, bese uvala insimbi waffle. Ukupheka pizza kuwufanele mayelana imizuzu emihlanu, kodwa konke kuncike ugqinsi inhlama. Uma une inhlama elincanyana, ukuthi imizuzu emihlanu kwanela, kodwa lokho mkhulu, isikhathi eside kuzodingeka ukugcina pizza endaweni yensimbi waffle.
Ngamaholide ngokuvamile ezihlukahlukene izitsha olungiselelwe ofakwe, futhi toppings ngaso sonke isikhathi kusetshenziswe kuze kube sekupheleni. Okufanele ukwenze izinsalela? Ungakwazi ukupheka kubo ngokugcwele waffle waffle yensimbi, ukuqedela ukuzidlela ubumnandi - ngakho ungenawo ukuhumusha umkhiqizo futhi uzokwazi ukudala isidlo entsha ngokuphelele futhi eyingqayizivele.
Uphayinaphu nge obabayo
lokushisa High caramelizing ushukela zemvelo ezitholakala uphayinaphu. A upelepele nokucija sigcwalisa kahle ubumnandi izithelo. Indlela kulokhu silula - udinga ukusika uphayinaphu zibe tincetu (uma sebenzisa okusemathinini uphayinaphu, ungakwazi lesi sinyathelo). Uma ukupheka uphayinaphu fresh, le waffle bamba ithambo kufanele ugcine cishe ezine imizuzu, uma sikhuluma izithelo okusemathinini ke umzuzu owodwa kwanele. Ngemuva ukupheka, ufafaze powder kusuka upelepele ukuqedela isidlo. Njengoba ubona, izithako uyodinga inombolo ubuncane, kodwa umphumela uba nje Amazing elicwengiweyo, ngakho kufanele nakanjani ukuzama ukupheka lokhu isidlo - ngeke enchant nawe.
Leresiphi ilungele izinsuku ehlobo kushisa, lapho ngisho nomqondo nekungenisa Ohhavini kukuqede amandla. Kulokhu, into esemqoka - ukuba kahle beka izithako amathrekhi insimbi waffle zazibonakala, kanye isici tebuciko ifeza indima ebaluleke kakhulu. Ngakho, okokuqala kudingeka alungiselele izithako ze isaladi - ngezinye izikhathi ingaba umthombo zahlukahlukene kakhulu, kuye ngokuthi ukunambitheka yakho. Nokho, kungcono kakhulu, inhlanganisela amaqanda abilisiwe, ubhontshisi oluhlaza kanye namazambane abilisiwe. Konke lokhu kufanele uzilungiselele kusenesikhathi futhi nquma ngendlela ofuna ke - kungaba izingcezu ezincane, zingaba nkulu kakhulu. Engeza imifino, ngiyibeke zonke on ipuleti esikhulu, ukuze okuqukethwe kwakheka phezu flat - ngeke kamuva kube tuna nikubeke ezinhliziyweni zenu. Ungakwazi ukwengeza izithako ezengeziwe ezifana iminqumo oqoshiwe kanye cherry utamatisi. Ukupheka izinhlanzi akuthathi isikhathi esiningi - esingengaphezu kwemizuzu eyisithupha. Ngemuva ukupheka, nquma izinhlanzi ukuze imikhondo waffle ungase ubone uma ngilibeke phezu isaladi olungiselelwe kusengaphambili. Ngemva kwalokho, wena kuyomane kwenezele ibhandishi, usawoti kanye pepper ukunambitha dish - futhi silungele ukukhonza ke etafuleni.
Kuhle yogurt grudnichka ongumphelelisi
Inkukhu soufflé: iresiphi
Inyama Man - kuyini?
Potato pancake. Eziningana ukupheka lokhu isidlo zokupheka
Isiginesha yakho isidlo - ihansi Christmas
Recipe: kastyby amazambane. ubuchwepheshe abasuselwe sokulungiselela
Indlela i-caffeine kuthinta ubuchopho bakho nomzimba?
Iminyango steel Izici ezikhethekile
Ngezigaba nohlanga lwezilimi: izimiso eziyisisekelo futhi izici
Amathiphu balimi imfundamakhwela: indlela yokubhekana goutweed
Ihhotela U Sladku 3 * (Prague, Czech Republic): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Car Volkswagen Transporter T5: Ukucaciswa, izincazelo kanye nokubuyekezwa of abanikazi
Nature - ithempeli noma workshop? Izimpikiswano kanye ngokumelene
Indlela yokwenza amazambane chips ekhaya
Alokaziya: ukunakekelwa ekhaya. Amathiphu namacebo
Kirk Douglas: Biography futhi umsebenzi